IINDABA ZEFOX ZIYAPHUMA NGAPHEZULU KWEDISNEYLAND'S WHITE SNOW RIDE - I-DISNEYLAND
Ezinzulwini Zobusuku Ilanga
Millie Bobby Omdaka
Abahlobo Ukudibana Kwakhona
Iindaba zeFox News zizama ukwenza ingqumbo engaphezulu kweDisneyland's Snow White Ride
Njengoko iDisneyland ekugqibeleni ivula eluntwini, abagcini bepaki baya kudibana nokhangelo olutsha ngokusekwe kwifilimu yoopopayi yakudala I-Snow White kunye neeNtsuku ezisixhenxe . Uhambo olwalusaziwa njenge-Snow White's Adventry Scary Adventures ngoku luthathelwe indawo yi-Snow White's Enchanted Wish, uhlaziyo lwala maxesha olwenzelwe ukwenza ukukhwela kungoyiki abantwana. Lo ngumbono oqinisekileyo, njengoko ukukhwela kwakudala, singathi, sikhohlakele kubugqwirha? Kodwa ngelixa uhambo oluhlaziyiweyo lufumene isabelo salo sabalandeli, ibikwangumbandela we ivuliwe kwi-SFGate .
kwiipaki zemingxunya kunye ne-rec
Umhleli oLawulayo uKatie Dowd kunye nombhali uJulie Tremaine banika uhambo oluhlaziyiweyo uhlolo oluqaqambileyo, bedumisa itekhnoloji entsha yeaudio kunye netekhnoloji yokuhamba. Umcimbi wabo kuphela wokukhwela kukubandakanywa kwendawo yokwenyani yothando lokwenyani, apho inkosana yamanga i-Snow White eleleyo ukuze yaphule umlingo. Oko kuphuzana, ewe, akuvumelani, kwaye akwenzi jibe kunye nezinye iinguqulelo zenkcubeko ezenzeka epakini (njengokuhlaziya ukuya kwiJungle Cruise kunye neSplash Mountain). Bayabhala, Ngaba asikavumelani ukuba imvume kwiimovie zakuqala zeDisney ngumba ophambili? Oko kufundisa abantwana ukuba ukwanga, xa kungakhange kusekwe ukuba omabini amaqela azimisele ukubandakanya, akulungile?
Kulungile ngokwaneleyo, ndiyaqikelela. Kodwa ngelixa ababhali bekhankanya imiba yemvume kuphononongo oluqinisekileyo lokukhwela, abantu kwiFox News banamathele kule nto njengemfazwe yenkcubeko yamva nje ngokuchasene neqela le-liberal. Iindaba zeFox News zinikezele ngamacandelo amaninzi kolu hlaselo lobuxoki, zijikeleza umhlathi omnye malunga nemvume kuyo yonke into engalunganga ngeDemokhrasi. Bade babambelela ku-Sen. John Kennedy (R-LA), ocacileyo ukuba akukho nto ingcono anokuyenza ngexesha lakhe:
Yonke intsasa. Kuba umntu ubhalele ukuthatha iSango leSan Francisco. pic.twitter.com/pfc338doHO
-UMateyu Gertz (@MattGertz) Meyi 3, 2021
Iindaba zeFox News zibetha imiba ebalulekileyo, njengokucima i-Snow White.
USen.John Kennedy (R-LA): Siyaxakaniseka. Andazi ukuba ezi jackaloon zizephi nale nto. pic.twitter.com/NtF1JvpDDB
-Ibali (@thherecount) Meyi 3, 2021
Lilonke, iindaba zeFox News zikhombe ukukhwela ubuncinci amatyeli asithoba izolo, kunye neFox Business Network ichukumisa amaxesha amahlanu ahlukeneyo. Ndicinga ukuba akasekho uTrump eofisini othumele iFox News ukukrokrela ibhidi efanelekileyo. Kwaye yile nto bayikhethileyo. Uloyiko lwabo lubonisa oku kutsha nje I-Orlando Sentinel ivuliwe NguJonathan VanBoskerck, owayekhalaza ngelithi ubundlobongela bonakalisa amava eepaki zeDisney.
yu gi oh abalinganiswa ababhinqileyo
Kwakhona, konke oku kwenziwa ngumsindo kuyimpendulo kumhlathi omnye kuphononongo lwe-Intanethi lwendlela yokukhwela epakini. Kwaye ngelixa iimvakalelo zakho kwinqaku zisenokwahluka, akunangqondo kwaphela kwiFox News ukumelana nomhlathi wenkululeko yenkululeko kunye nomhla ogcwele ukugubungela ingqumbo. Yinkcubeko yokucaphuka i-ouroboros yokholo olubi oluxineneyo phakathi kweentengiso ze-catheters kunye ne-mesothelioma lawsuits. Yenza ngcono, wonke umntu.
Ukulungiswa kweFox News kulo mhlathi kukwathetha ukuba kuncinci kangakanani na ekufuneka bekuthethile ebusweni bempikiswano kunye nempumelelo enkulu kwiintsuku zokuqala ze-100 kubongameli bukaBiden. Ngaphandle kokuba umongameli oMnyama ahlasele okanye umongameli weorenji azenze uthixo, bonke baphelelwe ziimbono. Mhlawumbi baya kuba nethamsanqa kwaye babambe uJoe Biden kwi-suit suit.
(nge Irhamncwa lemihla ngemihla , umfanekiso: iscreencap)
U-henry cavill njengo-edward cullen
abagcini Galaxy 2 tropes
x-iyunifomu yamadoda ngokuhamba kwexesha
Ngaba u-helen keller ubuqhetseba